तपाईंको प्रेमिका आकर्षित गर्न १० तरिकाहरू - PAMPEREDPEOPLENY.COM - सम्बन्ध
तपाईंको प्रेमिका आकर्षित गर्न १० तरिकाहरू
घर सम्बन्ध प्रेम र रोमान्स प्रेम र रोमान्स oi-Denise द्वारा डेनिस ब्याप्टिस्ट | प्रकाशित: बुधवार, अक्टोबर ,०, २०१ 2013, १ :33: [:33 [IST]
त्यहाँ कहिले काँही तपाईं सम्बन्ध मा बोर हुन्छन्, र यी समयमा तपाइँ आफ्नो सम्बन्ध रहन्छ वा छैन थाहा छैन। यस क्षणमा, सबै एक सम्बन्ध बनाउन सबै सम्बन्ध सल्लाह प्राप्त गर्न हताश हुन्छ प्रेम गर्न चमक बनाउन। एक सम्बन्धमा सजिलैसँग मर्ने मुख्य चीजहरू मध्ये एक आकर्षण हो। तपाईलाई मन पराउने कोहीप्रति शारीरिक वा मानसिक आकर्षण हुनु वास्तवमा तपाईले आफ्नो पुरुष र महिलालाई कत्ति माया गर्नुहुन्छ भनेर देखाउन सक्नुहुन्छ।
व्यायाम रान र हिप बोसो कम गर्न व्यायाम
भनिन्छ कि तपाई जति धेरै आफ्नो प्रेमीलाई आकर्षित गर्नुहुन्छ, त्यति नै दुई व्यक्तिको बिच बढ्दो प्रेम बढ्दै जान्छ। यदि तपाईं आफ्नो सम्बन्धमा तपाईंको प्रेमिकाको ध्यान प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने, यहाँ तपाईंले गर्नुपर्ने केही चीजहरू छन्। यदि तपाईं यी सम्बन्ध सल्लाहमा ध्यान दिनुहुन्छ भने हामी तपाईंको लागि स्टोरमा छौं, त्यसोभए तपाईंले पक्कै आफ्नो प्रेमिकाको ध्यान प्राप्त गर्नुहुनेछ।
पुरुषहरू जान्दछन् कि यो सँधै फेन्सी कपडाहरू वा पिकअप लाइनहरू हुँदैन जुन महिलालाई आकर्षित गर्दछ। यो तपाईको लागि के गर्नु हो जुन वास्तवमा गणना गरिन्छ। उनलाई मनपराउने चीजहरू गर्नाले सबै कुरामा सम्भव भएमा तपाईंतिर ध्यान आकर्षित गर्न मद्दत गर्दछ।
बोल्डस्कीले तपाईंलाई केहि तरिकाहरू मार्फत मद्दत पुर्‍याएको छ जहाँ तपाईं आफ्नो प्रेमिकाको ध्यान आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो लागि तपाईंको लागि रहेको सल्लाहहरू एक चोटि हेर्नुहोस्:
चाल - ढाल
जब यो सम्बन्धमा आउँदछ, यो महत्त्वपूर्ण छ तपाईंको शरीरको भाषालाई उत्तम तरीकाले व्यक्त गर्नु। आफुलाई आफैंमा कहिल्यै नफाल्नुहोस् किनभने केही महिलालाई यस्तो व्यवहार मनपर्दैन। उनीसँग कोमल हुनुहोस् र एक पटकमा एक कदम चाल्नुहोस्।
तपाईंको प्रेमिकाको ध्यान लिनको लागि, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं उसलाई अर्थपूर्ण बोल्नुहुन्छ। उनको छेउमा एक जानकार मानिस प्रत्येक महिलालाई चाहिन्छ। यदि तपाईं उनीको वरिपरि लजालु हुनुहुन्छ भने, छलफलको लागि एउटा विषय तयार गर्नुहोस्।
भारतको शीर्ष १० आध्यात्मिक गुरुहरू
कहिलेकाँही यो एक मानिस एक सम्बन्ध मा प्रभुत्व देखेर राम्रो छ, तथापि, यो सबै समयमा प्रोत्साहन हुँदैन। कुनै परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिई जब उनी तपाईलाई 'मानिस' हुन आवश्यक हुन्छ। यो तपाईं कसरी आफ्नो प्रेमिका को ध्यान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
उनको आकर्षक राजकुमार बन्नुहोस्! तपाईंको प्रेमिकाको ध्यानाकर्षण गर्ने उत्तम तरिकाहरू मध्ये एक प्राकृतिक आकर्षक बन्न सिक्नु हो। कुनै पनि झूटा ढोंगले यस चरणमा काम गर्दैन!
सबै महिलाहरू आफ्नो पुरुष तैयार र राम्रो लुगा लगाएको हेर्न मन पराउँछन्। तपाईको प्रेमिकालाई आकर्षित गर्ने एउटा तरिका उत्तम पुरुष हुनु, शारीरिक उपस्थितिमा हो।
हाँस्नुहोस् वा हाँस्नुहोस्
तपाईंले उसलाई देखाउन आवश्यक छ कि तपाईंसँग दाँतहरूको एक सही सेट छ र त्यसो गरेर तपाईं अलि अलि हास्नु पर्छ। हाँसो वा मुस्कुराउँदा उनको वरिपरि सहज हुन्छ। यो तपाइँको प्रेमिका आकर्षित गर्न को लागी अर्को तरीका हो।
तपाईको महिलासंग आँखा सम्पर्क राख्नु महत्वपूर्ण छ। जब तपाईं आफ्नो महिला प्रेम संग आँखा सम्पर्क बनाए, तपाईं उनलाई दिनुहुन्छ कि पूर्ण आश्वासन दिनुहुन्छ कि तपाईं दिमाग र आत्मा मा उनको साथ हुनुहुन्छ। आफ्नो प्रेमिका आकर्षित गर्न, जब तपाईं उनीसित कुरा गर्नुहुन्छ उनको आँखामा गहिरो हेर्नुहोस्।
नुहाउनु अघि कसरी कपालमा तेल लगाउने
बधाई, बधाई र बधाई! सबै महिलाहरू मन पराउँछन् र आफ्ना पुरुषहरूले उनीहरूलाई प्रशंसा दिन चाहन्छन्। यसले उनीहरूलाई हर प्रकारले विशेष महसुस गराउँदछ। यदि तपाईं आफ्नो प्रेमिका आकर्षित गर्न चाहनुहुन्छ भने, उनको प्रशंसा दिनुहोस्।
उनलाई मनपराउने चीजहरूको स्नान गर्नुहोस्, उनले तपाईंलाई यसका लागि थप माया गर्छिन्। यदि तपाईं आफ्नो प्रेमिकाको ध्यान आकर्षित गर्न चाहानुहुन्छ भने, उनलाई किनमेल गरी लैजानुहोस् र तपाईं बिलमा जानुहुन्छ।
महिला आफ्नो मान्छेलाई हास्यास्पद हुन मन पराउँछन्! मजाक र एक पटक एक तरीकाले मा गुदगुदा। उनी अनियमित हास्यको यो अभिनय मनपराउँछिन्। तपाईंको प्रेमिकाको ध्यान आकर्षित गर्न यो सम्बन्ध सल्लाह प्रयास गर्नुहोस्।
कसैको वर्णन गर्न सुरु हुने शब्दहरू
मुल्तानी मिट्टी र एलोवेरा फेस प्याक
मिर्गौला बीन्स लाभ र साइड इफेक्ट
गर्भावस्थामा कच्चा आम खाने को फाइदा